सर्पले टोकेर श्रीमतीको मृत्यु भयो भनेका श्रीमानको पोल जब डमी टेस्ट गरियो त्यसपछि खुल्यो सबै रहस्य ! – List Khabar
Home / Uncategorized / सर्पले टोकेर श्रीमतीको मृत्यु भयो भनेका श्रीमानको पोल जब डमी टेस्ट गरियो त्यसपछि खुल्यो सबै रहस्य !
admin October 16, 2021 Uncategorized, रोचक Leaveacomment 224 Views
भारतको केरला प्रदेशको पुलिसले एक रहस्यमय घटना सुल्झाउनका लागि अनौठौ डमी टेस्ट सार्बजनिक गरेका छन्। उथरा घटनाको जाँच गरिरहेको टोलीले एक सर्प तथा डमीको सीन रिक्रिएट गरेको छ । टीमले बिशेषज्ञको साथमा यो जान्ने कोशिश गरेको छ कि यदि सर्प नर्मल ड’ स्छ भने चो’ टको निशान कस्तो हुन्छ तथा त्यसलाई जिस्काएर ड’सा ‘उँदा कस्तो चो;ट हुन्छ भन्ने हेरेको छ ।
पछिल्लो ७ मे मा उथरा नामकी एक महिलालाई आफ्नै पतिको घरमा सर्पले ड’ सेर मृत्यु भएको थियो । जाँचको दौरान यो पत्ता लाग्यो कि उसको पति सुरजले जानी जानी सर्पले डसाएका थिए । पुलिसका अनुसार सुरजले लुकी छिपी एउटा गोबन सर्प किनेका थिए । जस्लाई प्रयोग गरेर उथरा लाई मा’ र्ने योजना बनाएका थिए ।
पुलिसले सुरजसंग सोधपुछ गर्दा यो खबर बाहिर आएको थियो । पुलिसले डमीको प्रयोगबाट यो सबै पत्ता लगाएको थियो । सर्पलाई डमीमा पर्ने गरी ख’सा’ईएको थियो । कैयौ पटक सर्पलाई डमीमा पर्ने गरी झारे पनि उसले डमीलाई आ’क्र’मण गरेको थिएन । तर सर्पको टाउको नजिक डमीको हात ल्याएर सर्पलाई भ’ड्का’इएको थियो ।
यस अवस्थामा पनि सर्पले डसेको थिएन डमीलाई । त्यसपछि सर्पको शरीरमा प्र’हा र गर्नको लागि डमीको हात प्रयोग गरिएको थियो जसको परिणाम स्वरुप डमीलाई सर्पले ड’से’को थियो ।
Previous नेपालमै ५० बर्षे पुरुषसँग १५ बर्षिय किशोरीको बिहे, बेहुला देखेपछि बेहुली बेहोस !
Next अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले भूउपग्रहबाट चीनमा खिचिएको तस्विरले सबैको होस उड्यो
अछाम, २ जेठ अछामकाे बान्‍नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा दाइले भाइलाई पराजित गरेका छन् । कांग्रेसका टेकबहादुर …